Sida loo hagaajiyo shaashadda hurdiga ah ee iPhone 7 | Wararka IPhone
Waa dhibaato aan ka soo jiidaneynay iPhone 5 taasna waxay umuuqataa inay sii kordheyso. Isbeddelada bixiyeyaasha ee shaashadaha iPhone, waxay sababaan aragtida shaashadaha in la beddelo inta u dhexeysa laba qalab farsamo ahaan loo siman yahay. Xaaladdan oo kale, qaar badan oo ka mid ah iPhone 7s waxay leeyihiin waxa adeegsadayaal badani u fahmaan qalad ahaan, shaashadda jaallaha ah, in kasta oo adeegsadayaasha kale ay doorbidaan codkan mid qabow. Sabab kasta ha noqotee, Waxaan ku bari doonnaa sida loo beddelo codka shaashadda qalab kasta oo iOS ahHaa, waa inaad haysataa iOS 10 rakibtay si aad ugu raaxeysan karto goobtan cusub ee Apple soo kordhisay.
Waxaas oo dhami way ka fudud yihiin intaad qiyaasi karto, ugu dambayntii waxaan awoodi doonnaa inaanu la jaanqaadno cufnaanta shaashaddayada si aannu u jeclaanno, in kasta oo aan shakhsi ahaan u haysto iPhone 6s waxaan sii wadaa inaan sii wado tirada silsiladda, maaddaama oo midabkeedu yar yahay, in kasta oo uu khafiif yahay, aniga waxay ila tahay inay midabbo leedahay xoogaa caajis ah.
Sida sawirka madaxa uu sheegayo, waxa ugu horeeya ee aan sameynayno waa inaan aado codsiyada Settings ee qalabkeena macruufka ah. Markaad gudaha gasho, waxaan raadin doonnaa liiska Gaaritaan, kan marar badan inagaga xoreeyay shaqooyinka culeyska badan ee iOS. Waxaan marin u helnaa Helitaanka si aan u raadino dejinta shaashadda shaashadda, oo hal marna waxaan helnaa hawsha «Filtarka Midabka«. Shaandheeyeyaas waa la jari doonaa marka loo eego, waan galeynaa waana shaqeyneynaa.
Hadda waxaan u dhaqaaqeynaa dhinaca hoose oo waxaan u dhaqaaqeynaa baararka illaa aan ka helno barta aan ugu jecel nahay xagga tirada shaashadda. Waa wax xasaasi ah, sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay noo sheegi doonto inaan helno tirada ku habboon baahiyahayaga, waxaan heli doonnaa wakhti fiican oo way nagu adkaan doontaa inaan la qabsanno. In sidan, waxaan hilmaami karnaa hurdi, ugu yaraan adeegsadayaasha aan ku faraxsanayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Ma ka daashay shaashadda jaallaha ah? Sida loo waafajiyo midabka shaashadda iPhone
Ruben Souto dijo
Ugu dambeyntii. Xalka dhibaatooyinkeyga. Halleeluuya
Jawaab Rubén Souto
javides wajiga dijo
Waxaan mar labaad mooshinka Rubén Souto! Maxay nafis u tahay indhahayga !!! Aad baad u mahadsantahay 😀
Ku jawaab javidesfase
Apple Campus 2 heerarka dhismaha
10k Orodyahan bilaash ah wakhti xaddidan